(trg)="1"> Loha Hevitra ato Anatiny
(trg)="2"> 8 Janoary 2000
(trg)="3"> Fitsaboana sy Fandidiana Tsy Ampiasana Ra — Mihabe Mpangataka
(trg)="4"> Fahita kokoa noho ny hatramin’izay ankehitriny ny fitsaboana sy ny fandidiana tsy ampiasana ra .
(trg)="5"> Nahoana no betsaka aoka izany no mangataka azy io ?
(trg)="6"> Fomba fitsaboana azo antoka sy azo asolo ny fampidiran - dra ve izy io ?
(trg)="7"> 3 Mpisava Lalana teo Amin’ny Fitsaboana
(trg)="8"> 4 Fampidiran - dra — Tantara Lava Feno Fiadian - kevitra
(trg)="9"> 7 Mihabe Mpangataka ny Fitsaboana sy ny Fandidiana Tsy Ampiasana Ra
(trg)="11"> 14 Mampitombo ny Fatran’ny Kôlesterôla ao Aminao ve ny Kafe ?
(trg)="12"> 20 “ Ireo Gazety Tsara Indrindra Misy ”
(trg)="13"> 21 Tohanan’ny Fanantenana mba Hiaritra Fisedrana
(trg)="14"> 25 La Bambouseraie — Nofy Iray Tanteraka
(trg)="15"> 28 Fijerena An’izao Tontolo Izao
(src)="16"> ٣٠ من قرائنا
(trg)="16"> 30 Avy Amin’ny Mpamaky
(trg)="17"> 31 Nitana ny Teny Nataony Izy Ireo !
(trg)="18"> 32 ‘ Namelombelona Tokoa Ry Zareo ! ’
(trg)="19"> Ny Tontolo Mahagagan’ireo Bibikely 15
(trg)="20"> Toy izay hamono izay bibikely rehetra sendra anao , tsy aleo ve miana - javatra momba ny tontolo mahagagan’ireo bibikely ?
(trg)="21"> Fomba Fijery Voalanjalanja Momba ny Fomba Amam - panaon’ny Besinimaro 26
(trg)="22"> Fomba amam - panao maro no mifototra amin’ny finoanoam - poana sy ny hevitra ara - pivavahana tsy ara - baiboly .
(trg)="23"> Ahoana no tokony hiheveran’ny Kristianina iray ny fanao toy ireny ?
(trg)="1"> Mpisava Lalana teo Amin’ny Fitsaboana
(trg)="2"> IRAIKA amby enimpolo taona i José , lehilahy belza iray , avy ao amin’ny tanàna kelin’i Oupeye , raha nilazana fa nila fandidiana fanoloana aty izy .
(trg)="3"> “ Mbola tsy taitra mafy toy izany aho hatramin’izay niainako ” , hoy izy .
(trg)="4"> Efapolo taona monja lasa izay , dia zavatra tsy azo noeritreretina izany fanoloana aty izany .
(trg)="5"> Na dia tamin’ireo taona 1970 aza , dia 30 isan - jato teo ho eo monja ny tahan’ny fahaveloman’izay nanaovana izany fandidiana izany .
(trg)="6"> Fandidiana atao mahazatra anefa ny fanoloana aty amin’izao andro izao , ary ambony lavitra kokoa ny tahan’ny fahombiazana .
(trg)="7"> Mbola misy lafy ratsiny iray lehibe anefa .
(trg)="8"> Koa satria matetika ny fanoloana aty no miteraka fandehanan - dra be loatra , dia mazàna ny dokotera no manao fampidiran - dra mandritra ny fandidiana .
(trg)="9"> Noho ny hevitra ara - pivavahana itompoany , dia tsy naniry handray ra i José .
(trg)="10"> Tena naniry ilay fanoloana aty anefa izy .
(trg)="11"> Zavatra tsy nety ho azo atao ve ?
(trg)="12"> Nety hisy hihevitra toy izany .
(trg)="13"> Nihevitra anefa ilay lehiben’ny mpandidy fa tena nety hahomby izy sy ireo mpiara - miasa taminy raha nandidy tsy nampiasa ra .
(trg)="14"> Ary dia izany tokoa no nataon’izy ireo !
(trg)="15"> Dimy amby roapolo andro monja taorian’ny fandidiana azy , dia nody i José , notronin’ny vadiny sy ny zanany vavy .
(trg)="17"> Noho ny fahaizan’ireo izay antsoin’ny gazetiboky Time hoe “ ireo mahery fon’ny fitsaboana ” , dia fahita kokoa noho ny hatramin’izay ny fitsaboana sy ny fandidiana tsy ampiasana ra ankehitriny .
(trg)="18"> Nahoana anefa no be mpangataka erỳ izy io ?
(trg)="19"> Mba hamaliana izany fanontaniana izany , dia andeha aloha isika handinika ny tantara misafotofoton’ny fampidiran - dra .
(trg)="20"> [ Fanamarihana ambany pejy ]
(trg)="21"> Mihevitra ny fandidiana famindrana taova ho raharaha mahakasika ny feon’ny fieritreretan’ny tsirairay ny Vavolombelon’i Jehovah .
(trg)="22"> [ Sary , pejy 3 ]
(trg)="23"> Maneran - tany izao dia misy dokotera maherin’ny 90 000 efa nampahafantatra fa vonona hitsabo Vavolombelon’i Jehovah tsy misy fampiasana ra , izy ireo
(trg)="1"> Fampidiran - dra — Tantara Lava Feno Fiadian - kevitra
(trg)="2"> “ Raha fanafody vaovao ny liomena amin’izao andro izao , dia ho sarotra be ny hahazoan - dalana hampiasa azy . ” — Dr .
(trg)="4"> TAMIN’NY ririnin’ny taona 1667 , dia nentina tany amin’i Jean - Baptiste Denis , dokotera nalazan’i Louis XIV , mpanjakan’i Frantsa , ny lehilahy adala iray sy nahery setra nantsoina hoe Antoine Mauroy .
(trg)="5"> Nanana ny “ fanafody ” filamatra ho an’ny hadalan’i Mauroy i Denis : fampidirana ran - janak’ondry , izay noheveriny fa hampitony ilay marariny .
(trg)="6"> Tsy nandeha tsara anefa ny toe - javatra ho an’i Mauroy .
(trg)="7"> Marina aloha fa nihatsara izy taorian’ny fampidiran - dra fanindroany .
(trg)="8"> Nihetsika indray anefa ny fahavoazan’ny sain’ilay Frantsay , fotoana fohy taorian’izany , ka tsy ela akory dia maty izy .
(trg)="9"> Niteraka adihevitra nafana tany Frantsa ny andrana nataon’i Denis , izay nampiasany ram - biby , na dia fantatra aza tatỳ aoriana fa fanapoizinana tamin’ny arsenika no tena nahafaty an’i Mauroy .
(trg)="10"> Tamin’ny farany , tamin’ny 1670 , dia norarana ilay fomba fitsaboana .
(trg)="11"> Rehefa nandeha ny fotoana , dia nandrara ny hampiasana azy io koa ny Parlemanta anglisy ary na dia ny papa aza .
(trg)="12"> Hadino ny resaka fampidiran - dra nandritra ireo 150 taona nanaraka .
(trg)="13"> Loza tany am - boalohany
(trg)="14"> Velona indray ny fampidiran - dra tamin’ny taonjato faha - 19 .
(trg)="15"> Anglisy nantsoina hoe James Blundell , dokotera manam - pahaizana momba ny fiterahana , no nitarika izany .
(trg)="16"> Nanana teknika nohatsaraina sy fitaovana maoderina i Blundell , sady nanizingizina fa ran’olombelona ihany no tokony hampiasaina , ka nisarika ny sain’ny daholobe indray ho amin’ny fampidiran - dra izy .
(trg)="17"> Tamin’ny 1873 anefa , dia nampiadana ny famelomana indray ny fampidiran - dra ny dokotera poloney iray nantsoina hoe F .
(trg)="18"> Gesellius , rehefa nahita zavatra nampahatahotra : Maherin’ny antsasak’ireo fampidiran - dra natao no niafara tamin’ny fahafatesana .
(trg)="19"> Nisy dokotera nalaza nanomboka nanakiana ny fampidiran - dra , rehefa nandre izany .
(trg)="20"> Nanjary lefy laza indray ny fampidiran - dra .
(trg)="21"> Avy eo , tamin’ny 1878 , i Georges Hayem , dokotera frantsay , dia nahavita soa aman - tsara ranoka masira , izay mety hahasolo ra , araka ny filazany .
(trg)="22"> Tsy mba toy ny ra ny ranoka masira , fa tsy misy vokany hafa , tsy mivaingana ary tsy mananosarotra ny fitaterana azy .
(trg)="23"> Tsy mahagaga raha nanjary niely patrana ny fampiasana ny ranoka masiran’i Hayem .
(trg)="24"> Mahagaga anefa fa tsy ela dia tian’ny daholobe kokoa indray ny ra .
(trg)="25"> Fa nahoana ?
(trg)="26"> Tamin’ny 1900 mantsy , dia hitan’ilay Aotrisianina nantsoina hoe Karl Landsteiner , mpanao fikarohana momba ny aretina , fa hay , misy karazany ny ra , ary hitany fa tsy afaka mifangaro foana ny ra samy hafa karazana .
(trg)="27"> Tsy mahagaga raha niafara tamin’ny loza ny fampidiran - dra maro aoka izany tamin’ny lasa !
(trg)="28"> Azo ovana izany izao , amin’ny fanaovana fotsiny izay hahazoana antoka fa afaka mifangaro amin’ny karazan - dran’ilay mpandray ny an’ilay mpanome .
(trg)="29"> Rehefa nahalala izany ireo dokotera , dia natoky indray ny fampidiran - dra — ara - potoana tsara ho amin’ny Ady Lehibe Voalohany .
(trg)="30"> Ny fampidiran - dra sy ny ady
(trg)="31"> Nandritra ny Ady Lehibe Voalohany , dia nampiasaina be dia be ny fampidiran - dra tamin’ireo miaramila naratra .
(trg)="32"> Mivaingana haingana ny ra , mazava ho azy , ary teo aloha , dia nila ho tsy azo natao ny nitatitra azy io nankany amin’ny toeram - piadiana .
(trg)="33"> Teo am - piandohan’ny taonjato faha - 20 anefa , ny Dr .
(trg)="34"> Richard Lewisohn , tao amin’ny Mount Sinai Hospital , ao New York , dia nahomby rehefa nanao andrana tamin - javatra misakana ny ra tsy hivaingana , antsoina hoe citrate de soude .
(trg)="35"> Fahagagana no niheveran’ny dokotera sasany an’io fandrosoana tampoka nampientam - po io .
(trg)="36"> “ Izany dia mila hitovy amin’ny hoe najanona tsy hihetsika ny masoandro ” , hoy ny nosoratan’ny Dr .
(trg)="38"> Bernheim , dokotera nalaza tamin’ny androny .
(trg)="39"> Nitombo ny fangatahan - dra nandritra ny Ady Lehibe Faharoa .
(trg)="40"> Natao vary raraka ny fanentanana ny daholobe tamin’ny alalan’ny takelaka misy soratra hoe “ Manomeza Ra Izao ” , “ Afaka Mamonjy Azy ny Ranao ” , ary “ Nanome ny Rany Izy .
(trg)="41"> Hanome ny Anao ve Ianao ? ”
(trg)="42"> Be dia be no namaly ilay antso fangatahan - dra .
(trg)="43"> Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa , dia ra 6 500 000 litatra teo ho eo no nisy nanome , tany Etazonia .
(trg)="44"> Notombanana fa ra maherin’ny 260 000 litatra no nangonina tany Londres , sy nozaraina .
(trg)="45"> Mazava ho azy fa nitondra loza ara - pahasalamana maromaro ny fampidiran - dra , araka ny hita mazava tsara tatỳ aoriana kely .
(trg)="46"> Aretina nentin’ny ra
(trg)="47"> Taorian’ny Ady Lehibe Faharoa , dia nanao dingan - dava ny fitsaboana ka azo natao ny fandidiana sasany izay tsy azo nalaina sary an - tsaina akory teo aloha .
(trg)="48"> Ho vokany , dia niseho ny orinasa iray naneran - tany nikirakira vola an’arivo tapitrisany dolara maro isan - taona , mba hamatsy ra hanaovana fampidiran - dra , izay nanomboka noheverin’ny dokotera ho fomba fitsaboana filamatra , rehefa mandidy .
(trg)="49"> Tsy ela anefa dia nisongadina ny fanahiana ny amin’ny aretina mifandray amin’ny fampidiran - dra .
(trg)="50"> Nandritra ny Adin’i Korea , ohatra , dia efa ho ny 22 isan - jaton’ireo nampidirana ranon - dra no voan’ny hépatite — efa ho avo telo heny noho ny nandritra ny Ady Lehibe Faharoa .
(trg)="51"> Tamin’ireo taona 1970 , ny Foibe Amerikanina Miady Amin’ny Aretina dia nanombana fa 3 500 no maty isan - taona noho ny hépatite mifandray amin’ny fampidiran - dra .
(trg)="52"> Misy hafa manombana avo folo heny noho izany .
(trg)="53"> Noho ny fitiliana tsara kokoa sy ny fifantenana tamim - pitandremana kokoa ny mpanome ra , dia nihena ny fifindran’ny aretina hépatite B .
(trg)="54"> Avy eo anefa dia niteraka fahavoazana be ilay virosy amin’ny endriny iray vaovao — ny virosin’ny hépatite C — ary mahafaty indraindray .
(trg)="55"> Notombanana fa Amerikanina efatra tapitrisa no tratran’ilay virosy , ka tamin’ny alalan’ny fampidiran - dra no nahazoan’ny ana hetsiny maro ilay izy .
(trg)="56"> Marina aloha fa nampihena ny fielezan’ny hépatite C ny fitsirihana hentitra dia hentitra , tatỳ aoriana .
(trg)="57"> Na izany aza , dia misy matahotra sao hisy loza vaovao hipoitra izay tsy ho fantatra raha tsy rehefa diso aoriana loatra .
(trg)="58"> Raharaha iray hafa mahafa - baraka : ra voaloton’ny VIH
(trg)="59"> Tamin’ireo taona 1980 , dia hita fa afaka mandoto ny ra ny VIH , ilay tsimokaretina miteraka ny SIDA .
(trg)="60"> Tamin’ny voalohany , dia halan’ireo mpiasa tao amin’ny bankin - dra ny nieritreritra hoe mety ho voaloto ny tahirin - drany .